ယနေ့ည ချက်စတာဖီးလ်နဲ့ အက်ဖ်အေ ဖလားပွဲကို ဘယ်သူတွေ လွဲချော်မလဲ ဆိုတာ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ တူချယ် - xyznews.co
ယနေ့ည ချက်စတာဖီးလ်နဲ့ အက်ဖ်အေ ဖလားပွဲကို ဘယ်သူတွေ လွဲချော်မလဲ ဆိုတာ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ တူချယ်
January 8, 2022 - by Editor
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ယနေ့ညမှာ အက်ဖ်အေ ဖလား တတိယ အဆင့်ပွဲ အဖြစ် non-league ကလပ် ဖြစ်တဲ့ ချက်စတာဖီးလ် အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစားသွားဖို့ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီပွဲကို အဓိက အသင်းသား အချို့ ဆက်လက် လွဲချော်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ နည်းပြ ဖြစ်သူ သောမတ်စ် တူချယ် ကတော့ ယနေ့ညပွဲမှာ လူငယ် အချို့ကို မိတ်ဆက်သွားဖို့ များပါတယ် ။
ကြားရက် က တော့တင်ဟမ်ကို ၂ – ၀ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့ပွဲမှာ လက်သန်းကျိုးသွားခဲ့တဲ့ ဂျာမန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ကစားသမား ကိုင်ဟာဗက်ဇ်ရဲ့ အခြေအနေ က ထင်သလောက် မဆိုးခဲ့တာကြောင့် ၊ ယနေ့ညပွဲကို မပါဝင်သည့်တိုင် ၊ စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ် ။
အလားတူ ကလပ် အသင်းခေါင်းဆောင် စပိန် ဝါရင့် ညာနောက်ခံလူ ဆီဆာ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ဟာလည်း ထိုပွဲပြီးခါနီးမှာ လူစားလဲခံခဲ့ရပေမယ့် ၊ ကြွက်တက်မှုသာ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း တူချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ကျော ဒဏ်ရာ ရထားတာ အချိန် အတိုင်းအတာ တခု ကြာခဲ့တဲ့ ဒိန်းမတ် လက်ရွေးစင် ခံစစ်မှူး အန်ဒရီယာစ် ခရစ်တန်ဆန် ဟာလည်း လေ့ကျင့်မှု ပြန်လည် စတင်နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ယင်း ကစားသမား ၃ဦးလုံး ယနေ့ညပွဲမှာ ပါဝင် ကစားဖို့ အလျင်မလိုပေမယ့် ၊ နောက်အပတ် မှာ ကစားမယ့် တော့တင်ဟမ် ၊ မန်စီးတီး အသင်းတွေနဲ့ အဝေးကွင်းပွဲတွေ အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြမှာ သေချာပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် မနေ့က လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်မှာ အရန် အချို့နဲ့ ယူ ၂၃ လူငယ် ကြယ်ပွင့် အချို့လည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ်နဲ့ ပွဲမတိုင်မီ ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် အဖြေထွက်ခဲ့တဲ့ ဝါရင့် ဘရာဇီး ခံစစ်မှူး သီယာဂို ဆေးလ်ဗားနဲ့ ပြင်သစ် ကွင်းလယ် အင်ဂျင် အန်ဂိုလို ကန်တေတို့ဟာလည်း အထွေအထူး စိုးရိမ်စရာ မရှိကြောင်း မနေ့က ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ တူချယ် က အခုလိုပဲ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ဒဏ်ရာ သတင်းက ထူးထူးခြားခြား အသစ် မရှိပါဘူး ။ အားလုံး သိထားကြတဲ့ အတိုင်း ကာလရှည် ဒဏ်ရာ ရထားတဲ့ ချီလီနဲ့ ရိစ်တို့က ပြန်လာဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် တော့တင်ဟမ်နဲ့ပွဲမှာ အက်ဇ်ပီ ဟာ ရိုးရိုး ကြွက်တက်ခဲ့တာက လွဲပြီး ၊ ကံကောင်းစွာနဲ့ ဘာဒဏ်ရာမှ မရခဲ့ပါဘူး ။ ”
” ကိုင်ရဲ့ လက်သန်းကျိုး ဒဏ်ရာကလည်း ဘောလုံး ကစားလို့ မရလောက်အောင် အထိတော့ ပြင်းထန်မှု မရှိပါဘူး ။ ဒီတော့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး နည်းပြဆရာတွေက သူ့ကို ဆက်ပြီး ကုသမှု ပေးသွားမှာပါ ။ အန်ဒရီယာစ် ကတော့ မနေ့က လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်မှာ ပြန်လည် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၊ ဒီနေ့မှာ တခြား တုန့်ပြန်မှု ထူးထူးခြားခြား မပြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ။ ”
” ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် က အခြေအနေကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ကလပ် ဆရာဝန်နဲ့လည်း အဲဒီ နောက်ပိုင်း စကားပြောသွားဦးမှာပါ ။ အခြေအနေ က ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ပြီး ဖြစ်တည်နေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ အနည်းဆုံးတော့ သူ ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်နေရင် ခံစစ် အတွက် ရွေးချယ်စရာ ရှိတာပေါ့ဗျာ ။ ”
” သီယာဂိုနဲ့ အန်ဂိုလို တို့ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ က ပြင်းထန်မှု မရှိပါဘူး ။ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ ။ အခုအချိန် အထိတော့ ဆေးစစ်ချက်တွေ အရ ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် ဖြစ်သူ အသစ် မတိုးသေးပါဘူး ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article အာဆီယံ နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား . . . . ဘယ် နိုင်ငံတွေ က ဒေသတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဖလား သမိုင်းကြောင်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြသလဲ ?
Next Article မင်နဲရိုး နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ကော်စတာ ၊ အချုပ်ကလွတ်လာတဲ့ မန်ဒီ ၊ အလွတ် နဲ့ ရမယ့် ဆန်းချက် တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ